ကုန်ကြမ်း Apatinib (811803-05-1) HPLC≥98% | AASraw ရွေးချယ် inhibitor
/ ထုတ်ကုန်များ / R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း / Apatinib (811803-05-1)
SKU: 811803-05-1. အမျိုးအစား: R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Apatinib (CAS 811803-05-1) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Apatinib, သွေးကြော endothelial growth factor receptor-2 ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်တဲ့ဝတ္ထုသေးငယ်တဲ့မော်လီကျူး tyrosine kinase inhibitor, အောက်တိုဘာ 2014 အတွက်တရုတ်နိုင်ငံတွင်သွားကြောင်းအစာအိမ်ဒါ့အပြင်ဘို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ယနေ့အထိတတိယလိုင်းကုထုံးတစျမြိုးအဖြစ်အဆင့်မြင့်အူမကင်ဆာ၎င်း၏အသုံးပြုမှုအပေါ်ပထမဦးဆုံးအစီရင်ခံစာကိုဖြစ်ပါတယ်။
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 111-114 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
စတီရွိုက်သံသရာအတွက် Apatinib (811803-05-1) အသုံးပြုမှု
ထို့အပြင် YN811803D05, Mesylate အဖြစ်လူသိများ Apatinib (CAS 1-968-1) ။
ကင်ဆာဝေဒနာရှင် 28 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့စဉ် Apatinib ၏မတူညီဆေးများအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ Apatinib ကောင်းစွာ 750 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆေးများမှာသည်းခံခဲ့ပါတယ် / နေ့ mg,3၏31000 / နေ့ mg နှင့်အများဆုံးသည်းခံထိုး be850 မီလီဂရမ် / နေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်မှာကန့်သတ်အဆိပ်အစီရင်ခံခဲ့သည်ထိုး။
သငျသညျ Apatinib ယူတဲ့အခါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုသိရပေမည်။ ဘုံဘေးထွက် effectsof apatinib သွေးတိုးရောဂါနှင့်လက်ခြေမ syndrome ရောဂါ ရှိ. , သို့သော် apatinib ၏အဆိပ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ခံသာဖြစ်ခဲ့သည်။
Rivoceranib (Apatinib, YN968D1) အဆင့်မြင့်သို့မဟုတ်သွားကြောင်းအစာအိမ်ကင်ဆာ, အူမကင်ဆာ, နှင့် hepatocellular carcinoma အပါအဝင်အစိုင်အခဲကျိတ်များ၏ကုသမှုများအတွက်, LSK BioPharma အားဖြင့်တရုတ်ပြင်ပဖွံ့ဖြိုးခံရကာနှုတ် bioavailable စမ်းသပ်မူးယစ်ဆေးကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။ YN968D1 ပထမဦးဆုံးတောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Advenchen ဓာတ်ခွဲခန်းများကဖန်တီးခြင်းနှင့်မူပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ Apatinib လက်ရှိတွင်တရုတ်-နယ်မြေလိုင်စင်-ကိုင်ဆောင်သူ, Jiangsu Hengrui MedicineCo အားဖြင့်အဆင့်မြင့်အစာအိမ်ကင်ဆာများအတွက်တရုတ်အတွက်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ , Ltd မှအဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့်Aitan®အောက်မှာ။ LSK BioPharma (တရုတ်ဖယ်ထုတ်ပြီး) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကိုရရှိထားသူနှင့်တောင်ကိုရီးယား rivoceranibin ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စျေးကွက်များအတွက်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
Rivoceranib အကျိတ်-mediatedangiogenesis များအတွက်အဓိကလမ်းကြောင်း mediates ရာ (VEGFR2 အဖြစ်လူသိများ) သွေးကြော endothelial growth factor receptor-2 တစ်ဦးရွေးချယ်အစွမ်းထက် inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆေးပညာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 1,000 လူနာကျော်အတွက်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်အစာအိမ်ကင်ဆာ, အူမကင်ဆာ, hepatocellular carcinoma, Non-သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာ, esophageal ကင်ဆာ, thyroidcancer, mesothelioma နှင့် neuroendocrine ကင်ဆာအပါအဝင်မြောက်မြားစွာကင်ဆာအတွက်ထိရောက်မှု hasdemonstrated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစ tosignificantly chemotherapeutics နှင့် immunotherapy နဲ့ပေါင်းပြီးရလာဒ်အဖြစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုထုံးများအတွက်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်အလားအလာပြသခဲ့သည်။
AASraw ထံမှ Apatinib ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို